လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန | MOALI - Ministry of Agriculture , Livestock and Irrigation
Submitted by Anonymous (not verified) on Fri, 04/07/2017 - 15:55
ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့သည် မြန်မာပြည်၏ မြေယာသယံဇာတများကိုအသုံးချလို၍ လယ်ယာမြေများကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်စေပြီး စိုက်ပျိုးမြေအားလုံးပေါ်မှ မြေခွန်ကောက်ခံကာ ၎င်းတို့၏ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားကြီး အာဏာ စက်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် ရပ်တည်လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် မြေယာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို လက်ဝါးကြီး အုပ်၍ ကုန်သွယ်မှုအမြတ်ထုတ်ရန် ကြံစည်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ကြံစည်ကြိုးပမ်းချက်နှင့်အတူ အိန္ဒိယအစိုးရသည် မြန်မာပြည်ကို ၎င်းတို့၏ ပြည်နယ် တစ်ခု အဖြစ် ထားရှိသည်နှင့်အညီ မြန်မာပြည်သို့အုပ်ချုပ်ရန်စေလွှတ်သော အဖွဲ့များဖြစ်သည့် Home Department, Department of Revenue, Agriculture and Commerce, Land Revenue and Settlement, Surveyor General of India ဝန်ထမ်းများအား မြေတိုင်းသွန်သင်ချက် (Survey Instructions)များကိုပါ သင်ကြား စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့သည် ၎င်းတို့ မအုပ်ချုပ်ရသေးသောဒေသတို့ကို တည်တည်တံ့တံ့ အုပ်ချုပ်နိုင်ရန် အတွက် မြေတိုင်းတာမြေပုံထုတ်သည့်လုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်ပြီး နယ်မြေဒေသကို စနစ်တကျပိုင်းခြား အုပ်ချုပ်ခြင်း၊ မြေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့် လယ်ယာကဏ္ဍစာရင်းဇယားများ ပြုစုခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြပါသည်။
ဗျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားခိုင်မာစွာ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာငွေ အမြောက် အမြား ရှာဖွေနိုင်ရန် လယ်ယာမြေများကို ယခင်ဝမ်းစာရှာဖွေရေးမှ စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးကို ဦးတည်ချက် ထားလျက် ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့်စနစ်အမျိုးမျိုးဖြင့် လုပ်ကိုင်စေခဲ့ရာတွင် မြေခွန်၊မြေတိုင်း၊ ကြေးတိုင်၊ မြေစာရင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ အချိန်ကြာမြင့်စွာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပေါင်းစပ် သန္ဓေတည်ခဲ့ကြ ပါသည်။
၁၈၈၇ ခုနှစ်တွင် မြေစာရင်းဌာနကို စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍ Department of Land Records and Agriculture ဌာနကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါသည်။ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြေခွန်တော်နှုန်းထား သတ်မှတ်သည့် ကြေးတိုင်လုပ်ငန်းကို သီးသန့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် Department of Settlement ကို ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။
ဗြိတိသျှတို့သည်မြန်မာပြည်ကို မဟာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီး (Chief Commissioner) လက်အောက်တွင် ထားရှိပြီး ဥပဒေများပြဋ္ဌာန်း အုပ်ချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ဌာနများဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ် ခဲ့ပါသည်။ ၁၈၉၇ ခုနှစ် မေလ(၁)ရက်နေ့တွင် ဒုတိယဘုရင်ခံချုပ်မှ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၈၈၇ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၂)ရက်နေ့တွင် Mr. W.T. Hall ကို Director of the Department of Land Records and Agriculture အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ယင်းလက်အောက်တွင် ခရိုင်လယ်ဝန်ရာထူးများ ခန့်ထားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
၁၉၀၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၀)ရက်နေ့တွင် ကြေးတိုင်လုပ်ငန်း၊ မြေစာရင်းလုပ်ငန်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်း၍ Directorate of Settlement, Land Record and Agriculture ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၀၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် မြေခွန်တော် စည်းကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုထိရောက်ကျယ်ပြန့်စွာ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်စိုက်ပျိုးရေးဌာနကိုခွဲထုတ်၍ ကြေးတိုင်ဌာနနှင့်မြေစာရင်းဌာန တို့အား ပူးပေါင်းပြီး Commissioner of Settlement and Director of Land Records Department ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး အက်ဥပဒေမူကြမ်းကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် သစ်တော ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ မြေယာဌာနခွဲမှ (၉.၉.၁၉၄၈) ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ကြောင်း၊ လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို မူလက လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောဝန်ကြီး ဌာနမှ ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းလုပ်ငန်းကို ကျယ်ပြန့်စွာနှင့် သီးသန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၁၉၅၂ခုနှစ်တွင် လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ်ပေါက်လာပြီး ၎င်း၏လက်အောက်တွင် လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးဌာနခွဲ၊ လျော်ကြေး ဌာနခွဲ၊ ကြေးတိုင်နှင့်မြေစာရင်းဌာနခွဲနှင့် မြေတိုင်းဌာနခွဲ တို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင် ပြုလုပ်ရေးဌာနခွဲနှင့်လျော်ကြေးဌာနခွဲကို ကြေးတိုင်နှင့်မြေစာရင်းဌာန လက်အောက်သို့ သွတ်သွင်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၅)ရက်နေ့တွင် လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင် ပြုလုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဖျက်သိမ်း၍ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောဝန်ကြီးဌာနအောက်သို့ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ ကြေးတိုင် နှင့်မြေစာရင်းဦးစီးဌာနကိုလည်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၄)ရက်နေ့မှစ၍ ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၁၅.၁.၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅)၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အပေါ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ (၂၈.၄.၂၀၁၅)ရက်စွဲ ပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၃/၂၀၁၅) ဖြင့် ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်းဦးစီးဌာနရှိ အရာထမ်း(၃၉၅)နေရာ၊ အမှုထမ်း(၁၃၉၁၈)နေရာတို့ဖြင့် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနအမည်ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
(က) မြေတိုင်းတာ၍ မြေပုံများ ပြည့်စုံစွာထားရှိရေးနှင့် မြေကြီး၊ မြေပုံ၊ မြေစာရင်းမှန်ကန်အောင် ဆောင်ရွက်ရေး
(ခ) သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုစာရင်းများ မှန်ကန်စွာ ကောက်ယူ၊ ပြုစု၊ ထုတ်ပြန်ရေး၊
(ဂ) မြေယာအသုံးချမှုစာရင်းများ မှန်ကန်စွာ ကောက်ယူ၊ ပြုစု၊ ထုတ်ပြန်ရေး၊
(ဃ) လယ်ယာကဏ္ဍ နှင့် မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ်ထူထောင်ရေး
(င) လယ်ယာမြေဥပဒေ၊မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေများနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေး
(ဆ) လယ်ယာစီးပွားစစ်တမ်းများ ကောက်ယူ၊ ပြုစု၊ ထုတ်ပြန်ရေး၊
(ဇ) စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေနှင့်အညီ စာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်ပေးရေး
(ဈ) ဌာနလုပ်ငန်းများအတွက် ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ လေ့ကျင့်၊ ပြုစု၊ ပျိုးထောင်ရေး။
လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ မျှော်မှန်းချက် (Vision)
လယ်ယာကဏ္ဍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လယ်ယာကဏ္ဍနှင့် မြေအသုံးချမှု ဆိုင်ရာ စာရင်းအင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ ထောက်ပံ့ပေးရေး။
To Provide Reliable Agricultural and Land Use Statistics For Sustainable Agricultural Sector Development .
လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက် (Mission)
(က) မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား အခြေခံ၍ ခိုင်မာသောသတင်းအချက်အလက်စနစ် ထူထောင်ရေး၊
(ခ) ခိုင်မာမှန်ကန်သည့် လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာစာရင်းအင်း သတင်းအချက်အလက် စနစ် ထူထောင်ရေး။
လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ (Main Function)
(က) ဌာနတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် ကွင်းမြေပုံများအား ဒီဂျစ်တယ်မြေပုံများအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရေးအတွက် မြေတိုင်းတာခြင်း၊
မြေပုံထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုနှစ် အလိုက် စီမံချက်များချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း
(ခ) လယ်ယာကဏ္ဍဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ မှန်ကန်စွာ
ကောက်ယူ၊ ပြုစု၊ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊
(ဂ) မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ စာရင်းအင်းအချက်အလက်များအား ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ မှန်ကန်စွာ
(ဃ) ဌာနမှတိုင်းတာထားသည့်မြေပုံများ၊ လယ်ယာကဏ္ဍနှင့်မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာစာရင်းအင်း အချက် အလက်များ အသုံးပြု၍
(င) လယ်ယာမြေနှင့်၊ မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထား
သည့် ကော်မတီသို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွင် မိမိဌာနဝန်ထမ်းများ ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပါဝင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) ကြေးတိုင်လုပ်ငန်းများအား ကြေးတိုင်လက်စွဲပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ) လယ်ယာကဏ္ဍနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သော လူမှုစီးပွားရေးစစ်တမ်းများနှင့်
လယ်ယာသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ကောက်ယူပြုစုခြင်း၊
(ဇ) စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပါပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်ပေးသည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ) ဌာန၏ မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်များကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်
ရည်မြင့်မားရေးအတွက် လိုအပ်သည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခြင်း။